Maro ny mpianatry ny CEG sy Lycée roboka… : voasariky ny fivarotantena amin’ny alalan’ny «internet» ny ankizy | NewsMada
Maro ny mpianatry ny CEG sy Lycée roboka… : voasariky ny fivarotantena amin’ny alalan’ny «internet» ny ankizy
Vokatry ny firoborobon’ny teknolojia maoderna amin’izao fotoana izao, miroborobo ny fivarotantenan’ny ankizy tsy ampy taona amin’ny alalan’ny «internet», sy ny tambajotra sosialy, toy ny facebook. Roboka sy voasarika amin’izany ny ankamaroan’ny mpianatra amin’ny CEG sy Lycée, araka ny vokatry ny fanadihadiana nataon’ny Ecpat France.
« Ampiasain’ny ankizy hivarotan-tena indray ny internet amin’izao fotoana izao », araka ny fanadihadiana nataon’ny Ecpat France momba ny fifandraisan’ny internet sy ny fivarotantena. Notanterahina ny volana marsa- novambra 2014 teto Antananarivo sy Nosy Be amin’ny ankizy 150 nanaiky nanontaniana ny fanadihadiana. Nangalana hevitra koa ny olona mitazona cyber café, ny mpitantana toerana fanorana samihafa, ny tompon’ny toerana fandraisam-bahiny…
Mitady mpanjifa amin’ny internet ny zaza malagasy satria efa azo amin’ny alalan’ny finday ny internet, amin’izao fotoana izao. Maro tsy tambo isaina rahateo ny cyber café saika isaky ny fokontany ahitana azy. Teo aloha, ny ankizy tsy mianatra no mivaro-tena eny an-dalambe sy amin’ny toeram-pisotroana. Ankehitriny, ireo mpianatra mihitsy no mikirakira ny internet mivaro-tena miafina. « Nivoitra amin’ny fanadihadiana fa voasarika amin’ny fivarotantena ny mpianatra eny amin’ny CEG sy Lycée manodidina ny 16-17 taona ny 60%. Misy ihany ny 13-15 taona fa mahalana », hoy ny tomponandraikitry ny fikarohana ao amin’ny Ecpat France miasa eto amintsika, Rafalimaro Honoré, omaly teny Anosy.
Tsy mahafantatra ny ray aman-dreny…
Sarotra ny manenjika ny mpivarotena sy ny mpanjifa satria amin’ny alalan’ny internet sy ny finday ny fifandraisana. Ny 85% ny ray aman-dreny rahateo tsy mahalala ny zavatra ampiasain’ny zanany ny internet. Endrika iray isehoan’ny heloka amin’ny tambajotran-tserasera ny fivarotantena amin’ny internet. Manimba ny ankizy ara-batana sy ara-tsaina ny fivarotantena sady manakorontana ny fianarany.
Momba ny lalàna, tsy azo enjehina ny ankizy mivaro-tena satria tsy ampy taona, mahazo sazy famonjana dimy ka hatramin’ny 10 taona kosa ny olona miaraka aminy. Matetika anefa, vitan’ny raharaham-pihavanana ny tranga eo amin’ny roa tonta. Ireo mpanjifa, niavaka ny lehilahy efa manambady mahatratra 37%. Eo koa ny tanora miasa. Nivoitra nandritra ny fanadihadiana, 5 000 Ar ka hatramin’ny 100 000Ar ny saran’ny firaisana ara-nofo indray mihodina.
Hanao hetsika lehibe hanairana ny ray aman-dreny sy ny mpitantana cyber café, ny mpianatra, ny mpiandraikitra tanora… ny Ecpat hizara vaovao manambara fa tokony hampiasaina am-pisainana ny internet tsy hanimba ny taranaka hoavy.